‘रैथाने जातको संरक्षण गर्दै उत्पादन होइन उत्पादकत्व बढाउ’ – Shasankhabar
‘रैथाने जातको संरक्षण गर्दै उत्पादन होइन उत्पादकत्व बढाउ’
चितवन । चितवनमा भएको एशिया क्षेत्रीय बाख्रा विज्ञहरुको सम्मेलनमा सहभागी विज्ञहरुले नेपालमा रैथाने जातको बाख्राको संरक्षण र बोयर जातको बाख्राको विकास गर्न सुझाव दिएकाछन् । बाख्राको उत्पादन मात्र नभई उत्पादकत्व बढाउन उनीहरुले सुझाव दिएका छन् ।
नेपालमा ८० प्रतिशत खसीबोकाको मासु देशकै उत्पादनले पुगेको अवस्था रहेकोले थप उत्पादकत्व बढाउन र बाख्रा पालनमा लागत कम गराउने गरी काम गर्नुपर्ने विज्ञहरुको सुझाव छ । चितवनको कृषि तथा वनविज्ञान विश्वविद्यालय रामपुरमा वैज्ञानिक बाख्रापालनको नमुना राष्ट्रिय अनुसन्धान तथा स्रोत केन्द्र बनाउने दीर्घकालीन उद्देश्य लिएर सम्मेलन गरिएको हो ।
कृषि तथा वनविज्ञान विश्वविद्यालय रामपुरमा आयोजना भएको एसिया क्षेत्रीय बाख्रा विज्ञहरुको सम्मेलनमा नेपाल, चीन, भारत, पाकिस्तान, बंगलादेश, अमेरिका, क्युबा, क्यानडा, इटाली, जापान, केन्यालगायत १५ देशका बाख्रा अनुसन्धान र विकासमा विशिष्ट योगदान दिएका सफल वैज्ञानिक, अनुसन्धानदाता, उद्यमी, विद्यार्थी र किसान प्रतिनिधिहरुको सहभागिता रहेको थियो ।
अन्तर्रा्ष्ट्रिय बाख्रा महासंघका अध्यक्ष डा. बेथ मिलरले बाख्रापालन अनुसन्धान र विकासको विश्व परिवेशबारे कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । वरिष्ठ पशु विकास अधिकृत डा. चन्द्र ढकाल र पशुसेवा विभागका उपमहानिर्देशक डा. दमयन्ती श्रेष्ठले नेपालको समग्र बाख्रा उत्पादनको नीतिगत व्यवस्था र सामाजिक आर्थिक अवस्थाका बारेमा विशेष कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।
सम्मेलनमा १०३ वटा कार्यपत्र प्रस्तुत भएकोमा ७४ वटा कार्यपत्र नेपालको थियो । प्रस्तुत भएका ४३ वटा पोस्टरमध्ये तीनवटामात्र विदेशी थियो । सम्मेलनमा प्रस्तुत भएका १० वटा आमन्त्रित कार्यपत्रमध्ये ४ वटा नेपालको थियो । ५५ वटा मौखिक कार्यपत्र प्रस्तुत भएको थियो, जसमा २७ वटा नेपालको थियो ।
कृषि तथा वनविज्ञान विश्वविद्यालयका रजिष्ट्रार प्राडा मनराज कोलाक्षपतिले ‘बाख्राको आनुवांशिक सुधारका प्रयासहरु’ विषयक विशेष कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । उहाँले बाख्राको महामारीका रुपमा फैलिएको पीपीआर रोग निर्मूल गरी उत्पादकत्व बढाउन सुझाव दिनुभएको छ । २०३० सम्म बाख्राको पीपीआर रोग देशबाट निर्मूल पार्ने सरकारको लक्ष्य रहेको छ ।
२०१८ अनुसार नेपालका पशुचौपायाको कुल संख्यामध्ये बाख्राको संख्या सबैभन्दा धेरै अर्थात् १ करोड २८ लाख रहेको छ । विश्वमा करिब ३५१ प्रजातिका बाख्रामध्ये एसिया महादेशमा मात्रै १४६ प्रजातिका बाख्रा पाइन्छन् भने नेपालमा ४ प्रजातिका रैथाने बाख्रा पाइन्छन् ।
नेपालमा बोयर जातको बाख्रालाई व्यावसायिकरुपमा पाल्ने अभियान चलेको छ । यसबाहेक खरी, जमुनापारी, तराई बाख्रा पनि नेपालमा बढी मात्रामा पालिएको पाइन्छ । बोयर बाख्रामा बढी फाइदा हुने भएकोले पछिल्लो समय व्यावसायिक किसानहरु यसतर्फ आकर्षित हुन थालेका छन् ।